Mon, Jul 23, 2018 | 01:54:10 NST
बालुबाटारबाट उडेको जहाज किन सिंहदरबारमा उत्र्यो ?
बोमलाल गिरी – कुरा गत साल जेठ १४ गतेको हो । त्यस दिन दिउँसो बालुवाटारबाट उडेको जहाज संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा पुगेर उत्रनु पर्ने थियो । तर संविधानसभा तिर नलागेर सिंहदरबारमा पुग्यो र त्यही उत्रियो ।
बाआमा भन्न लाज भएजस्तै भयो प्रजातन्त्र
मिलन तिमिल्सिना/उज्यालो – शहरबाट भर्खर गाउँ फर्केका ठिटाठिटीलाई आमा बा भन्न लाज भएजस्तो हिजोआज धेरैलाई प्रजातन्त्र भन्न लाज हुने गरेको छ । उन्नत बीउले रैथाने बालीनालीलाई विस्थापन गरेजस्तै गणतन्त्र र लोकतन्त्रले प्रजातन्त्रलाई ओझेलमा पारेको छ ।
यति हुँदा पनि किन पोल्दैन उनीहरुलाई ?
सुनिल न्यौपाने/उज्यालो – नेपालमा सयौं कामदारले काम गर्न सक्ने ठूला उद्योग नखुलेको सायद वर्षौं बित्यो होला । केहि एकाध होटल वा साना मसिना कारखाना खुल्नु नै देखाउन लायक कुरा भएका छन् । बेरोजगारी यति चरम अवस्थामा पुगेको छ की ‘मान्छे सप्लाइ गर्न’ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा छुट्टै लाइन बनाउन थालिएको छ ।
ती प्रेमील सम्झनाहरु
लक्ष्मण कार्की – विहीबारे हाटका कारण आधा दिनमात्रै पढाई भएर स्कूल छुटेपछि आधा दर्जन जति साथीको समूह मोराहाङ डाँडातिर सोझियो । उनीहरुमध्ये एकजनाको किताबको चेपमा थियो खामको दायाँपट्टि प्रापकमा उनको नाम लेखेको एउटा चिठी ।
विश्वविद्यालय हो रेडियो
अच्युत घिमिरे 'बुलबुल' - काठमाडौं रेडियो जादूको छडी हो । तपाईं यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यही प्रश्नको जवाफमा एउटा निबन्ध लेखेर बुझाएपछि इटालीका नागरिक क्लाउडियो रोच्चीले मलाई रेडियोकर्मीका रुपमा पहिलो पटक छानेका थिए सन् १९९९ मा ।
राम्रो नाम छ, गतिलो दाम छैन
मिलन तिमिल्सिना – ‘१०/११ वर्ष भयो भन्छौ जागिर खाको, खै त अहिलेसम्म के नाप्यौ ? जुनसुकै बेला पनि लुखुरलुखर अफिस जान्छौ । एकैथरी लुगा महिनौंसम्म लाउँछौ । दालभात बाहेक अरु कहिल्यै मुखमा परेको छैन । अरुले भाको भए घरजग्गा जोडिसक्थे ।
बाटो बिराउँदाको आनन्द
गोपाल गुरागाईं – सम्झन खोज्दा कविको नाम सम्झनामा आएन, तर कविको कविताले भन्छ ‘हिँड्दा हिँड्दै बाटो हराएपछि हिड्नेले पनि हराउनु पर्दो रहेछ’ !
समावेशीकरणको राजनैतिक चुनौती
"नेपालको कानून दैवले पनि नजानून्" यो भनाई उत्तिकै पुरानो हो जत्तिको पुरानो नेपाल हो। बुढ़ापाखाको यो परापूर्वकालदेखि को चलि आएको ऐतिहासिक भनाई हालसम्म पनि व्यवहारमा उत्तिकै लागु छ, शंका गर्नु पर्ने छैन्, र सोको तात्पर्य अब स्पष्ट हुदैं गईराखेको छ। हाम्रो देशको परिस्थिति देख्दा, हाल सम्म उपर्युक्त संविधान बन्ने बनाउने कार्य जारी छ।
बिजुली काट्ने ठाउँमा नेता राख्न पाए
मिलन तिमिल्सिना – तालिका परपर सार्दै जाने दलका नेतालाई पालैसँग विद्युत्त प्राधिकरणको लाइन काट्ने ठाउँमा नियुक्त गर्ने हो भने कहिल्यै पनि लोडसेडिङ हुँदैन । लोडसेडिङको तालिकामा उपभोक्तालाई सात समूहमा विभाजन गरिएको छ, ठूला भनिने सातै दलका नेतालाई एकएक समूहमा नियुक्त गर्ने ।
थाङ्नामा बसेर थाङ्ने भन्नेलाई
मिलन तिमिल्सिना – थाङ्नामा गुटमुटिएर हुर्किएका हामी अरुलाई थाङ्ने देख्छौं र माग्ने पारामा विदेशीको नक्कल गर्छौं । पाखापखेरा भुलेर पाखे भन्दै पश्चिमा काखामा पल्टिन खोज्छौं । हाम्रा आफ्नै चालचलन र संस्कृति देखेर वाक्क गर्छौं र अरुको इशारामा मख्ख पर्छौं ।
मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, दलको स्वार्थ र डा. केसीको सत्याग्रह,
श्रीधर पौडेल – प्रायः राजनीतिक वहसले तात्ने हाम्रो समाज केही दिनदेखि सामाजिक÷शैक्षिक मुद्दाले तरंगित भईरहेको छ । अर्थात् मेडिकल शिक्षाको सुधारलाई केन्द्रमा राखेर डा. गोविन्द केसीले सुरु गर्नुभएको सत्याग्रहले नीति निर्माता, आम नागरिक, नेपाली मिडिया र समग्रमा भन्दा पुरै समाज हल्लिएको छ ।
हेमराज अर्याल – छोराछोरी जन्मिँदा निकै खुशी हुने बाबुआमा छोराछोरी हुर्किएपछि उनीहरुले गर्ने व्यवहारबाट प्रायः निराश हुन्छन् । कारण हो, बुढेसकालमा छोराछोरीबाट गरिएको अपेक्षा देख्न नपाउनु । अझ छोराबाट आसभरोसा गर्ने बाबुआमा धेरै हुन्छन् ।
मिस यु ! माघेनी मेला
लक्ष्मण कार्की – अल्लि पर्तिर खेतमा पात्लेका स्याउलाले बेरेका टहरामा होटल खुलेका होलान् । उसिनेर छोडाइवरि बेसारले पहेंलो पारेका अण्डा, चना, चाउमिन, खोयाबिर्के र स्याउलीबुजेको साथमा देशी बोतलमा प्याक भएका तरल पदार्थ मेनुमा होला । उसो त सानो हुँदा ताका हाम्रै दोकान हुन्थ्यो यस्ता मेलामा ।
सकिनसकी काम गर्छन् डाँडामाथिका घाम
मिलन तिमिल्सिना – ‘हजुरआमा सञ्चै हुनुहुन्छ ?’ ‘सञ्चै बाबु, मैले चिनिन त...’ ‘म मेनुका दिदीको भाइ, ठूल्दाइको जेठा छोरा क्या हजुरआमा...’ ‘ओहो बाबु..., कहिले आउनुभएको ? एउटा आँखाले केही देख्दिन, अर्कोले चाहिँ धमिलो मात्रै देख्छ....थलाँ परें बाबु....डाँडामाथिको घामजस्तो भएको छु..।’
डा. अरुणा उप्रेती - विचार गर्नोस् त ! मनपर्ने मानिससँग तपाईंको भेटघाट भइरहेछ र त्यो व्यक्तिले तपाईंसँग कुरा गर्दागर्दै मुख छोपेर उता फर्क्यो भने । तपाईं कुनै कामका लागि अन्तरवार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईंलाई विश्वास छ, तपाईं यो अन्तरवार्तामा सजिलै सफल हुनुहुनेछ ।
चिसो कर्णालीमा ६ घण्टा हेलिँदा
मिलन तिमिल्सिना – नदी र खोला नजिक घर भएपनि जिन्दगीमा अहिलेसम्म पौडी खेल्न जानेको छैन । भाइहरुसँग कहिलेकाहीँ थोपलखोलामा घुँडाघुँडा आउने पानीमा भ्यागुते स्टाइलमा डुबुल्की मारिन्थ्यो ।
वर्ष दिनमा संविधान बन्छ त नेताज्यू ?
मिलन तिमिल्सिना – अब त संविधान बन्छ भन्ने जनताको यो उत्साह महिना दिनमै भत्कन खोजेको छ । एक महिनासम्म त जनताको विश्वास कायम राख्न नसक्नेले वर्ष दिनमा कसरी संविधान दिन सक्छौ ? सबैले प्रश्न गर्न थालेका छन् नेताज्यू ! जवाफ के दिनुहुन्छ ?
प्रहरी हेल्चेक्य्राईंले यसरी दियो तनाव
माधव दुलाल – बेलुकीको सवा नौ बजिसकेको थियो । मोवाइलमा घण्टी बज्यो । ‘नमस्कार नमस्कार सञ्चै हजुर ?’ मैले भनें । सधैंजस्तो ‘सञ्चै, हजुरलाई नि ?’ भन्ने ज्वाईंको स्वभाविक जवाफ आज आएन । घुमाई फिराई र निकै गमेर ‘बहिनी त्यहाँ आएकी छ’ भनेपछि मैले ‘यहाँ त छैन’ भनें ।
कहिलेसम्म यसरी नै बचाउन सकिएला ?
सुनिल न्यौपाने – दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि थलिएका पत्रकार बीके पाल्पालीलाई सहयोग गर्नेहरु थपिंदै गएका छन् । सरकारले दिएको ५ लाखमा देश बिदेशबाट सहयोगी मन भएका नेपालीले पठाइदिएको रकम थपिने क्रम चलिरहेको छ ।
सद्दे मान्छेको समेत बेहाल बनाउने अस्पताल
मिलन तिमिल्सिना– गोजीमा १७ हजार रुपैयाँ बोकेर छोरीको उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल आइपुगेका बाराका एकजना मजदुर दिनभर अस्पतालमा भौंतारिए । अस्पतालमा विरामीको ठेलम्ठेल । टिकट लिंदादेखि डाक्टरलाई देखाउने बेलासम्म लामो लाइनमा घण्टौ पर्खनुपर्ने वाध्यता ।
हात खुट्टा फुट्ने समस्या र जोगिने उपाय
डा. अरुणा उप्रेती – हात, खुट्टा, गाला, ओठ फुट्ने समस्या साधारण स्वास्थ्य समस्याहरू हुन् । ओठ शरीरको सानो भाग भए पनि यो फुट्यो भने निकै दुःख दिन्छ । केहि खाँदा पोल्ने, हाँस्दा दुख्ने र अनुहारको सौन्दर्य बिग्रने हुन्छ । जाडोको समय वा सुख्खा धूलो चल्ने मौसममा सबभन्दा बढी ओट फुट्छ ।
किन आयो भीमसेनलाई ‘पसिना’ ?
मिलन तिमिल्सिना– कुद्ने मान्छेलाई समेत सितिमिति पसिना ननिस्कने चिसोको यो बेला एकै ठाउँमा रहिरहेको दोलखा भिमेश्वरको शिलामा आइतबार ‘पसिना’ आयो । सात वर्षपछि शिलामा पसिना देखिएको भन्दै देख्नेहरु आत्तिए । शंखघण्ट बजाएर पूजाआजा गरे । कपासले शिला पुछे । केही नहोस् भन्दै प्रार्थना गरे ।
मिलन तिमिल्सिना – गाउँको सानो झुपडी । सेतै फुलेकी हजुरआमा, दिनरात कामको बोझले लखतरान भएका बाआमा, गरिबी र अभावमा बाँचेका भाइबहिनी । एकबाली धान फल्ने खेत, सिजन परे मकै र कोदो फल्ने थोरै पाखोबारी । डाँडामाथिको घामजस्तै भएकी हजुरआमा अझै ठमठमती हिँड्नुहुन्छ ।
एकरात अस्पताल बस्दा...
मिलन तिमिल्सिना – अस्पतालमा रातभर बसेर बिरामी नकुरेको पनि धेरै नै भएको रहेछ । १२/१५ वर्ष पहिले ठुलो हजुरबा बिरामी भएर ल्याउँदा वीर अस्पतालमा दुईरात जति कुरेर बसेको थिएँ । ओम ठुलो बा, शिव काका, रामचन्द्र दाइहरुसँगै ।
मिलन तिमिल्सिना – भात तिहुन पकाउने, भाँडा मोल्ने, कपडा धुने, किनमेल गर्ने जस्ता घरधन्दामा कहिल्यै मन गएन । घरमा हुँदा समेत मन गरेर काम गरिएन, खान मात्र अघि सरिन्थ्यो । सानो छँदा चाहिं बाख्रा थुन्ने, कुँडो पकाउने, तरकारी केलाउने, पल्लो घरमा आगो लिन जाने जस्ता सानातिना काम गर्नुपर्थ्यो ।
कम्मर दुखेमा के गर्ने ?
डा. अरुणा उप्रेती – जीवनमा एक न एकपटक ढाड नदुखेका मानिस प्रायः कमै हुन्छन् । केहि नभएको व्यक्तिलाई पनि एक्कासी निहुरि“दा वा केहि काम गर्दा चसक्क भए जस्तो हुने र त्यसपछि ढाडको दुखाइ सुरु हुन्छ । ढाड दुख्ने व्यक्तिहरू सुरुको अनुभव यसरी नै सुनाउँछन् ।
नपाउने र नचाहनेका व्यथा
मिलन तिमिल्सिना – चुनावको मुखमा बिरामी बुबालाई अस्पतालमा कुरेर बस्नुभएकी रञ्जना दिदीले भन्नुभयो, ‘तिहारमा जाँदा बाले चुनावको कुरा धेरै गर्नुभएको थियो । भतिजो रामले यो पार्टीले भोट दिनुपर्छ भन्छ तर जगन्नाथ र प्रेमनाथले चाहिँ पहिले जसलाई दिएको हो उसैलाई है दाइ भन्दैछन् ।
परनिर्भर राजनीतिले जकडिएको नेपाली समाज
विजय पौडेल – सहज सञ्चार र विज्ञानका कारण मानिसको जीवनशैली यति धेरै सरलीकरण भएको छ, त्यसको आभासका लागि न्यूयोर्क शहरमा नै बसोबास गरिरहनुपर्दैन । नेपालकै कुनै विकट गाउँको कुनामा पनि त्यसको झल्को देख्न सकिन्छ ।
सबैको ! तर कसैको नभएको म
लक्ष्मण कार्की – ‘ह्याप्पी तिहार साथी, सर, यार, ब्रो, दोस्त, दाजु, भाइ भनेर आएका म्यासेजको उरुङ थियो फेसबुक र मोबाइलमा । तर शुभेच्छा त एकथान औपचारिकता न हो । आशिष सबै पुरा हुने भए त विकासका लागि दुनियाभरका सिद्धान्त किन पो चाहिंदा हुन् र ?
विदेशिए दाजुभाइ, बिझायो तिहार
अनुपम शर्मिला – बिहानको साढे ८ बजेको रै’छ दशैं अघिदेखि परेको झरी अझै थामिएको थिएन । हिले दशैं मनाएर भोलीपल्ट त नुनको सोझो गर्न पुग्नुपर्ने थियो । त्यसको लागि आजै हिड्नुपर्थ्यो । कच्ची बाटो, हातमुख धुन नपाउँदै जिप आयो । ढिला जाउँ हिड्न सकिँदैन, हिंडिहालौ तयारी छैन ।
नेपोलियन बोनापार्टको खोजीमा
गोपाल गुरागाई - ददिराम सापकोटा पत्रकार, लेखक र चराविज्ञ त हुन् नै, त्योभन्दा धेरै दशौं वर्ष फ्रान्स बस्दा पनि नेपाल र नेपालीकै लागि मरिमेटेर काम गर्ने नेपाली हुन् । पाँचपल्ट अप्रेसन गर्दा पनि मृत्यु टार्न नसकेर उपचारका लागि फ्रान्स छिरेका ददिरामलाई युरोपका धेरै नेपाली पत्रकारले गुरु मान्छन् । तर उनका खास चेला हुन् बेल्जियमका सन्तोष न्यौपाने ।
यसरी चल्दैछ इजरायलमा कृषि शिक्षा
भगवान भट्ट,सन्तोष बस्नेत, रामकृष्ण पुरी/ पारान, इजराएल - साना किसान बैंक मार्फत इजरायलमा आधुनिक कृषि प्रणालीको अध्ययन गर्नको लागी यहाँ आएको करिब दूइ महिना बित्न लागिसकेको यस अवस्थामा हामिले नेपालमा भन्दा पृथक किसिमको कृषि प्रणलीका बारेमा अनुभव गर्ने सु–अवसर पाएका छौं ।
रुघाले सतायो ? यसो गर्नुहोस्
डा. अरुणा उप्रेती – संसारमा शायदै त्यस्तो व्यक्ति होला जसलाई जिन्दगीको कुनै न कुनै बेला रुघा नलागेको होस् । रुघाको लागि झण्डै २ सय प्रकारका जीवाणुहरू (भाइरस) जिम्मेवार हुन्छन् ।
गाडी वालाको दादागिरी सहँदै, फुत्कँदै
मिलन तिमिल्सिना - ‘बाबु तिमी घरमा आएपछि मात्र दशैं आउँछ, मिलाएर छिटो आउ है’ अष्टमीको दिन विहान उठ्ने बित्तिकै आमाले भनेको कुरा मनमा खेलिरह्यो । कहिले १२ बज्ला र अफिसबाट फुत्किउँला भनेर घडी हेर्न थालें ।
एनआरएनको रुपान्तरण होला त ?
सन्तोष न्यौपाने - ‘गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनका प्रमुख ब्यत्तिहरुमा निष्ठताको कमि रहेको छ । जसको कारण संसारभरका एनआरएनहरुले एकताबद्ध रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन । केन्द्रिय तथा राण्ट्रिय पदाधिकारीहरुमा सुशासन र पारदर्शिताको अवमुल्यनका कारण एनआरएन आफैमा कमजोर छ ।’
अबुधावी विमानस्थलमा एउटा नेपाली
गोपाल गुरागाईं - पशुपतिको दर्शन (बेल्जियम र फ्रान्सको घुमफिर) र सिद्राको ब्यापार (तालिम) एकसाथ गर्न हिडेका हाम्रो यात्राको शुरुआत सोच्दै नसोची एकाएक शुभ भैदियो । बिमानमा गोर्खे पाराले खानपीन र सुकला गर्दै अबुधावी बिमानस्थलमा ओर्लिदा मान्छे कमिला झै सल्बलाई रहेका थिए । अनि त्यो सलबलाहट पाईखाना अगाडि अलि बढी थियो ।
दशैंमा कति गर्नु गफ
मिलन तिमिल्सिना – शहरमा बस्ने मान्छे यसैपनि जान्नेसुन्ने । नेताहरुको दौराफेर समातेर कुद्नेदेखि ठेलागाडामा ठेलिनेसम्म सबैको भाउ भकारोको डिलमा मौलाएको सागजस्तो ह्वात्तै बढ्ने गर्छ ।
म फर्किएँ, दशैं फर्किएन
विनोद ढकाल – स्कुलको प्रार्थना सकिएर हामी भर्खर कक्षाकोठामा पसेका थियौं । हाजिर गर्न आउने सरले पढाउने सुरसार गर्नुभएन । बरु भन्नुभो ‘सबैले किताब यहीँ राख, तिमीहरुको केही हराउँदैन, आज हामी कमेरो लिन जाने ।’ स्कुलको भित्ता र गारोमा कमेरो छेपेर टिलिक्क टल्काएपछि बल्ल दशैं बिदा सुरु भयो अर्थात हामीलाई दशैं लाग्यो ।
चुनाव : सरकार त बन्छ, तर संविधान ?
सुनिल न्यौपाने/उज्यालो । होला वा नहोलाको आशंकाबीच उम्मेद्वारी दर्ता भएपछि अव चुनाव कम्तिमा तोकिएको मितिमै हुन्छ भनेर बिश्वास गर्नुपर्छ । हुन त उम्मेद्वारमाथि गोली दागेर अनी ‘वैद्य बा’का कार्यकर्ताले पुत्लामा अगुल्टो झोसेर अझै पनि मंसिर ४ को चुनावमा भाँजो हाल्ने प्रयत्न गरिनै रहेका छन्, तर यति नै कारण चुनाव सार्न पर्याप्त भनें हुनेछैनन् ।
आहा ! त्यो बेलाको दशैं
मिलन तिमिल्सिना । सामान किन्न मलेखु जाने बेला बाले सबैलाई बोलाएर खुट्टाको नापो लिनुहुन्थ्यो । बालाई हुने चप्पल आमालाई मिल्थ्यो । आमा र बाको भन्दा अलि ठूलो आकारको हजुरबालाई चाहिन्थ्यो । बा नै पसल जाने भएकाले उहाँहरुको नापो लिनै परेन ।